"ဒုက္ခဆိုတာ၊ အခက်အခဲဆိုတာ ကိုယ့်ကို ပိုပြီး သန်မာလာအောင် လုပ်ပေးတဲ့အရာပါ" • Brand You Academy
“ဒုက္ခဆိုတာ၊ အခက်အခဲဆိုတာ ကိုယ့်ကို ပိုပြီး သန်မာလာအောင် လုပ်ပေးတဲ့အရာပါ”
Brand You page မှာ Live လွှင့်တော့ အမြဲစောင့်ကြည့်ဆွေးနွေး၊ မေးခွန်းမေးနေကျ အစ်မတစ်ယောက်က ဝန်ထမ်းတွေကို အုပ်ချုပ်ရတာ၊ တိုးတက်အောင်လေ့ကျင့်ပေးရတာ မလွယ်တဲ့အကြောင်းလေး ပြောပြပါတယ်။ အဲဒါနဲ့ ဆက်စပ်စဉ်းစားမိတာလေး မျှဝေချင်ပါတယ်။
ဝန်ထမ်းအုပ်ချုပ်တာမှမဟုတ်၊ ဘယ်အရာမှ လွယ်လွယ်ရတယ် ဆိုတာမရှိပါဘူး။ လွယ်လွယ်ရရင်လည်း ကျွန်မတို့က တန်ဖိုးမထားတတ်ဘူး။ ဥပမာ ကျွန်မ မိတ်ဆွေတစ်ယောက်က စာအုပ် ၁၀ အုပ်လောက်ဝယ်ပြီး သူ့ရုံးက လူတွေကို ဖတ်ခိုင်းတယ်ဆိုတုန်းက ပျော်လိုက်တာ။ ကျွန်မအဖေက သူ့သူငယ်ချင်းတွေကို ညွှန်းလို့ သူ့သူငယ်ချင်းတွေက ဝိုင်းအားပေးကြရင်တော့ ကျေးဇူးတင်ရကောင်းမှန်းမသိဘူး။ တစ်ခုခုကို ကြိုးစားရုန်းကန်ပြီး ရလာတာက ကျွန်မတို့အတွက် ပိုပြီး achieve ဖြစ်တယ်လို့ ခံစားရစေတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို လေးစားမှုပိုရစေတဲ့အပြင် အခက်အခဲတွေကို ရင်ဆိုင်နိုင်တဲ့ အရည်အချင်းလည်း တိုးတက်လာစေတယ်။များသောအားဖြင့် ဘဝမှာ ဒုက္ခတွေ့တဲ့အခါ စိတ်ပျက်ကြပါတယ်။ ပြဿနာတွေကို မလိုချင်ဘူး။ အခက်အခဲတွေကို ရှောင်လွှဲချင်တာ၊ သူများအပေါ် ပုံချချင်တာ၊ အပြင်တင် စိတ်ဓါတ်ကျကြတာ သဘာဝပါ။
အခက်အခဲကိုရင်ဆိုင်နိုင်တဲ့ အစွမ်းသတ္တိဆိုတာကလည်း တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ အခြေခံစိတ်ဓါတ်၊ ဘဝအတွေ့အကြုံ၊ မိဘနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ သင်ကြားမှု၊ သဘောထားအမြင်တွေနဲ့ အများကြီး သက်ဆိုင်ပါတယ်။နောက်တကြိမ် အလုပ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မိသားစု၊ ငွေကြေး ဘယ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် အခက်အခဲ ပြဿနာတွေနဲ့ ကြုံတွေ့ရတဲ့အခါ..
၁။ ဒီအခက်အခဲက ဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလည်း စဉ်းစားပါ။ ဥပမာ ကိုယ်က သေးသေးလေးတုန်းက သတိမထားမိလို့ တဖြည်းဖြည်း အကြီးကြီးဖြစ်လာတာလား? မစဉ်းစားထားမိတဲ့ ရှုထောင့်ကနေ ပေါ်လာတာလား? တတ်နိုင်သလောက် ပြဿနာရဲ့ source ကိုရှာတော့မှ နောက်တကြိမ် ထပ်မဖြစ်အောင် ကာကွယ်နိုင်မှာပါ။
၂။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဖြစ်စေ၊ သူများကို ဖြစ်စေ၊ အခြေအနေကိုဖြစ်စေ အပြစ်မတင်မိအောင် ကြိုးစားပါ။ ပြောသလောက်တော့ မလွယ်ပါဘူး။ ကြိုးစားကြည့်ရင် ကိစ္စတစ်ခုကို ခံစားချက်အလွန်အကျွံမပါဘဲ အမှန်အတိုင်း မြင်တတ်လာပါလိမ့်မယ်။
၃။ အခက်အခဲကို ကျော်လွှားဖို့ မဟာဗျူဟာတွေ၊ နည်းလမ်းတွေ စဉ်းစားပါ။
၄။ ကိုယ်ဖြေရှင်းနိုင်တာထက် ကျော်လွန်နေတဲ့ အခက်အခဲမျိုးဆိုရင် ကိုယ့်ထက် သိတဲ့၊ တတ်တဲ့၊ ယုံကြည်ရတဲ့ လူမျိုးဆီကနေ အကြံဉာဏ်ယူပါ။ ဘယ်လောက်ပဲ ကောင်းတဲ့ အကြံဉာဏ်ရရ၊ တကယ်လုပ်ဆောင်ရမှာ ကိုယ်ပဲ ဆိုတာ မမေ့ပါနဲ့။
၅။ ဒီအခက်အခဲကနေ ကျော်လွှားနိုင်တဲ့အခါ ငါ့အနေနဲ့ စွမ်းရည်၊ သို့မဟုတ် အသိပညာ၊ သို့မဟုတ် ကျွမ်းကျင်မှု သို့မဟုတ် ကောင်းတာတစ်ခုခု တိုးတက်လာရမယ်.. ဆိုတဲ့ အတွေးအခေါ်မျိုးနဲ့ အကောင်းဆုံး ကိုယ်စွမ်း ဉာဏ်စွမ်းရှိသလောက် လုပ်ဆောင်ပါ။အခက်အခဲတွေကပဲ ကျွန်မတို့ကို ပိုပြီး သန်မာစေတာပါ။ ဘဝမှာ အဆင်ပြေလွန်းရင်လည်း အရည်အသွေးတွေ အရည်အချင်းတွေ အသုံးမချရရင် နှမြောစရာပါ။ တိုးတက်စရာလည်း မရှိတာမို့ စိတ်ဓါတ်ကျလာနိုင်ပါတယ်။ နောက်တကြိမ် အခက်အခဲနဲ့ တွေ့တဲ့အခါ ရဲရဲ ရင်ဆိုင်ပါ။ ကြောက်ကြောက်နဲ့ပဲ ရင်ဆိုင်ပါ။ အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်ပါ။ ဘဝက ပိုပြီး သန်မာလာပါလိမ့်မယ်။
Next“အကျိုးမရှိဘဲ အချိန်ကုန်ရခြင်း “Next